घतना – Sapana Sanjal
Posted in घतना
Sapana Sanjal : धादिङ – धादिङमा ट्रकको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार बाबु छोराको मृत्यु भएको छ । थाक्रे गाउँपालिका-६ महादेववेशीस्थित सडकमा ना.७ ख ९४४ नम्बरको ट्रकले गल्छिबाट काठमाडौं आउदै गरेको बा.७३ प २१७६ नम्बरको मोटरसाइकललाई मंगलबार दिउँसो ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार नुवाकोट विदुर नगरपालिका-१३ बस्ने ३५ वर्षीय नारायण शिवभक्ति र उनकै छोरा १० वर्षीय आर्यन शिवभक्तीको मृत्यु भएको हो । उनीहरुमध्ये आर्यनको घटनास्थलमा र नारायणको ट्रमा सेन्टर काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक धादिङ, त्रिपुरासुन्दरी बस्ने २० वर्षीय जीवन घर्तिको पनि सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंबाट मुग्लिनतर्फ जाँदै गरेको ट्रकलाई उछिन्ने क्रममा बिपरित दिशामा आएको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर ब्याक गरी पुनः मोटरसाइकल माथि चडाई अगाडि बढाएको सीसी क्यामरामा समे
Sapana Sanjal : एजेन्सी । खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डर वि स्फो ट हुँदा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित गोन्डा जिल्लामा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति भएको घटनामा दुईवटा पसल भत्किएका छन् । घटनामा थुप्रै मानिस घाइते भएका छन् । पसलको भवन भत्किदा १४ जना पुरीएका थिए । जसमध्य ७ जनाको निधन भएको छ भने अन्यलाई उद्दार गरिएको छ । मृत्यु हुनेमा दुई पूरुष, दुई महिला र तीन बच्चा छन् । घाइते भएकाहरुको अवस्था पनि ग म्भी र रहेको भारतीय मिडिया दैनिक भास्करले जनाएको छ । त्यसैकारण उनीहरुलाई जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारलगत्तै लखनऊस्थित ट्रमा सेन्टर लगिएको छ । युपीका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले प्रभावितहरुलाई तत्कालै उद्धार गर्न र राहत बाँड्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै उनले घटनाको उच्च स्तरीय जाँच गर्न पनि आदेश दिएका छन् । बि स्फो टमा ढुले का यी दुबै पसल एकआपसमा जोडिएका थिए । स्थानीयका अनुसार टि
Sapana Sanjal : आफ्नै श्रीमती र दुई जना भाइबाट धनुषाको हंसपुर नगरपालिकामा एक युवाको ज्या न ग एको छ । शनिबार बिहान राति २ बजे हंसपुर नगरपालिका-६ टिल्हीका २५ वर्षीय शम्भु मण्डलको ज्या न लि’एका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार घ,टनामा सं’लग्न उनकै श्रीमती २३ वर्षीया सुशीलादेवी मण्डल, भाइहरू जय र अनिल मण्डल सं’लग्न छन्। एक प्रहरीका अनुसार स्थानीय २७ वर्षीया सुशीलादेवी मण्डलले दुई देवर सञ्जय र अनिल मण्डलसँग मि’लेर यस्तो घ,टना घटाएको जानकारी दिए। सञ्जय र अनिल शम्भु मण्डलका माइला र कान्छो भाइ हुन्। घ,टनापश्चात् तीनैजना फ’रार भएका छन्। प्रहरीका अनुसार अनुसार शुक्रबार राति करिब २ बजे तीन जना मिलेर घरमै शम्भुको ज्या न लि एका रहेछन। बिहान सवा ३ बजे जानकारी आएपछि प्रहरी पुग्दा श’व भु’इँ’मा फेला परेको थियो। ‘हाम्रो टोली पुग्दा श्रीमती र दुई भाइ भा’गि’सकेका थिए,’ मिश्रले भने। पोस्टमा
.त्यसपछि यी युवती युवकको घरमा पुगेकी थिईन….!
Sapana Sanjal : काठमाडौं। विकृत मानसिकताका अ’पराध’हिरुले अ’पराध पनि निकै डरलाग्दो किसिमले गर्छन् । केही अपराध त यतिसम्म भ’यानक हुन्छन् कि ती घटनाको विवरण सुन्दासमेत हाम्रो सातो जान्छ । एक व्यक्तिले यतिसम्म डरलाग्दो गरी अ’पराध गरेका छन् कि उनको अपराधबारे सुन्दा समेत सामान्य मान्छेको सातो जान्छ । ती व्यक्तिले १९ वर्षकी उक किशोरीलाई फकाएर आफ्नो घरमा बोलाए । त्यसपछि उनले ती किशोरीलाई कर णी गरे । उनले गरिसकेपछि उनले किशोरीको टा’उ’को का’ ‘टे । उनको शवका सबै औं’लाका न’ङ’हरु उ’खेले, सबै दाँ’त भाँ’चे’र प्ला’स्टि’कको झोलामा राखे । उनको का’टि’ए’को टा’उ’को’लाई पानीमा हा’लेर उ’मा’ले । बाँकी रहेको शवका पनि सबै हातखुट्टा का’ ‘टे । द सनको रिपोर्टअनुसार सुन्दासमेत सातो जाने योघटना कजाखस्तानमा भएको हो । घटनाका संदिग्ध आ’रोपीलाई पक्राउ गरिएको छ । उनीमाथि १९ वर्षकी फेसन डिजाइनकी विद्यार्थी अयजान ए
Sapana Sanjal : काठमाडौं– कैलालीको धनगढी, हसनपुरका ४५ वर्षीय राजु श्रेष्ठलाई एक साताअघि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। श्वासप्रश्वासमा केही कठिनाइ भएपछि चार दिनअघि उनलाई त्यहाँस्थित नवजीवन अस्पताल भर्ना गरियो। तर, अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुनथाल्यो। अस्पतालले अक्सिजनको व्यवस्था आफैं गर्नू भनेपछि आफन्तले दुई दिनसम्म जसोतसो जोहो गरे। तर, थप अक्सिजन व्यवस्था गर्न कठिन हुने भएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्पताल लैजाने निधो गरे। ‘कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति सहज होला भनेर शुक्रबार हामीले नवजीवनबाट निकालेर सेतीमा भर्ना गर्‍यौं’, राजुका भतिजा बाबुराजा श्रेष्ठले भने। तर, सेतीमा पनि शुक्रबारदेखि नै अक्सिजन अभाव शुरु भइसकेको थियो। एकातिर अक्सिजनको अभाव, अर्कोतर्फ गम्भीर भएमा आइसीयू र भेन्टिलेटर सपोर्टको सुविधा उपलब्ध हुने सम्भावना नदेखेपछि परिवारले उनलाई काठमाडौं लैजाने निधो गर
Sapana Sanjal : गुल्मीमा चट्याङ लागेर घाईते भएकी १८ वर्षीय करिष्मा गाहाको मृ,त्यु भएको छ। बिहान सुतिरहेको समयमा घरमा चट्याङ लागेर घाईते भएकी करिस्मा लाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल तम्घास पुर्याईएको थियो। उक्त अस्पतालमा उपचार हुन नसकि पाल्पा रिफर गरिएकी गाहाको बाटोमा नि,धन भएको तम्घासबाट बिमल छन्तेलले जानकारी दिनुभयो। च’ट्याङ लागेर करिस्माको मुख,कपाल जलेको थियो। गुल्मीमा चट्याङ लागेर एकै परिवारका ७ जना सहित ९ जना घाईते भएका थिए। जसमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ४ दजाकोट स्थित स्थानीय उजिर सिहं गाहाको घरमा बिहान साढे ५ बजेको समयमा एक्कासी चट्याङ मगर सहित उनका परिवारका ७ जना घाईते भएका हुन्। बिहान सुतिरहेको समयमा घरमा चट्याङ पर्दा उजिर मगर सगैं उनकी श्रीमती ६२ वर्षीय सतिकला गाहा, छोरा ३७ वर्षीय तुल बहादुर गाहा, बुहारी ३२ वर्षीय जुनी गाहा, नातिनी बुहारी १८
Sapana Sanjal : काठमाडौ । .कोरोना पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना गर्न लैजादै गर्दा प्रतिनिधि सभा संसद सचिवालयका उपसचिव कृष्णराज खनालको मृ,त्यु भएको छ। उनलाई बुधवार गरिएको कोरोना परिक्षणमा पुष्टि भएको थियो । संसद बैठक बस्नु अघि सांसद र सचिवालयका सबै कर्मचारीको कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । केही कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएका मध्य खनाल पनि एक थिए । शुक्रबार बिहान कलंकीस्थित शहिद ममोरियल अस्पताल लैजाने क्रममा उनको मृ,त्यु भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बुधबार गरिएको परीक्षणमा चार सांसद र सचिवालयका तीन कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि खनाल चन्द्रागिरी–१२ स्थित घरमै आइसोलेसनमा बसेका थिए । शुक्रवार अचानक उनको स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न भएपछि अस्पताल लगिएको थियो । शुक्रवार विहान अस्पताल लैजाने क्रममा वाटोमै निधन भएको बताइएको छ । वैशाख २७ गते संसद वैठक बोलाइएपछि सांसद र सचिवा
Sapana Sanjal : एजेन्सी । भारतमा कोरोनाको महामारी फैलिएसंगै विरामी र औषधी एक शहरवाट अर्कोमा लैजान थालिएको छ । कोरोना संक्रमितले एउटा ठाउँको अस्पताल भरिए अर्को अस्पतालमा विमान मार्फत लगिने गरेको छ । यस्तैमा कोरोनाको औषधी बोकेको भारतीय विमान विहिवार राती दु,र्घटनामा परेको छ । भारतको मध्य प्रदेशमा रे म्डे सिभिर इ न्जे क्सन बोकेको विमान दु,र्घटना भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ग्वालियर विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दु,र्घटना भएको हो । विमान अवतरण गर्ने क्रममा रनवेमा चिप्लिएको हो । दु,र्घटनामा विमानका चालक र सहचालकलाई सामान्य चोट मात्र लागेको छ। साथै औषधी पनि सुरक्षित रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। ग्वालियर जिल्लाका प्रहरी अधिक्षक अमित सांघीका अनुसार बिहीबार राति साढे ८ बजेतिर दु,र्घटना भएको हो। उनले भने, ‘अवतरण क्रममा विमान रनवेबाट थोरै चिप्लिएको हो।’ त्
Sapana Sanjal : सागर भण्डारी,गुल्मी । गुल्मीमा चट्याङ लागेर एकै परिवारका ७ जना सहित ९ जना घाईते भएका छन् । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं ४ दजाकोट स्थित स्थानीय उजिर सिहं गाहाको घरमा बिहान साढे ५ बजेको समयमा एक्कासी चट्याङ मगर सहित उनका परिवारका ७ जना घाईते भएका हुन् । बिहान सुतिरहेको समयमा घरमा चट्याङ पर्दा उजिर मगर सगैं उनकी श्रीमती ६२ वर्षीय सतिकला गाहा, छोरा ३७ वर्षीय तुल बहादुर गाहा, बुहारी ३२ वर्षीय जुनी गाहा, नातिनी बुहारी १८ वर्षीय करिष्मा गाहा, नातिनी १४ वर्षीय मेलिना गाहा र नाति १८ वर्षीय जेनित गाहा घाईते भएका हुन् । त्यस्तै छिमेकी चित्र बहादुर गाहा र उनकी श्रीमती ज्योतिकला गाहा पनि घाईते भएका छन् । घाईते मध्ये करिष्माको अवस्था अत्यन्तै गम्भी रहेको बताईएको छ । उनको जिल्ला अस्पताल तम्घासमा उपचारको क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै जुनी गाहा, मेलिस गाहा र जेन
Sapana Sanjal : काठमाडौं । अस्पतालको प्रांगणमा दुई घण्टासम्म छटपटिंदा पनि अक्सिजन नपाएकी बाँकेकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । बैजनाथपुर गाउँपालिका–५ की ४६ वर्षीया महिलाको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो । सास फेर्न गाह्रो भएपछि उनलाई बुधबार दिउँसो नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर पुर्‍याइएको थियो । तर कलेज प्रशासनले गेटमा कोभिड–१९ का नयाँ बिरामी भर्ना स्थगन र कोभिडको शंकास्पद बिरामीलाई सेवा दिन असमर्थ रहेको सूचना टाँसेको थियो । उपचार पाउने झिनो आशामा आफन्तले उनलाई दुई घण्टासम्म अस्पताल प्रांगणमै राखे । बिरामी भर्ना गरिदिन आग्रह गरे । आइसोलेसन सेन्टरका संयोजक डा. प्रदीपकुमार चौधरीका अनुसार विरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याउनासाथ अक्सिजन लेभल जाँच्ने प्रयास गरिएको थियो । ‘तर अक्सिमिटरले अक्सिजन लेभल रिड गरेन । त्यसपछि अक्सिजन सपोर्ट दियौं, तर पनि उनलाई बचाउन सकिएन’ उनले भने । तर अस्पतालले